माओवादीबाट को-को बन्दैछन् मन्त्री ? फाइनल नेमलिस्ट तयार - News 88 Post
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार बिहान देउवासँगको भेटवार्ताका लागि बालुवाटार पुगेको देउवानिकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम सिफारिस गरेको बुझिएको छ । यद्यपि उनीहरुको नामबारे केही खुलाइएको छैन।
पछिल्लो समय माओवादीबाट सबैजना सांसदले मन्त्रीको लागि दबाब दिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले मानसिक तनाबमा परेको बताएका थिए।
हाल कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा देउवासहित कांग्रेसका चार र माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री रहेका छन्।
यसअघि बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा दलका शीर्ष नेताहरुलाई दिएको थियो।
याे समाचार पनि पढ्नुस्
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत पाउन सफल भएका छन् । उनको यस नियुक्तिलाई धेरैले आउँदो १७ महिना ढुक्क भयो भन्ठानेका छन् । तर, एमाले एकता भएमा जुनसुकै बेला सरकार धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
सामान्यत: एकपटक प्रधानमन्त्री चयन भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । देउवाले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको र विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेको कारण अर्को चुनाव नभएसम्म उनले नै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । तर, उनको यो कार्यकाल पनि निसर्त छैन ।
यसबीचमा गठबन्धनको कुनै पनि घटकले साथ छाडेमा देउवा सरकार ढल्नेछ ।
देउवालाई दलीय समर्थनबाट मात्र विश्वासको मत प्राप्त भएको छैन, सांसदहरुले व्यक्तिगत मत निर्णायक भएको छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी समर्थन दिनेमा एमालेका २२ जना सांसद छन् । एमाले अहिले दुई ध्रवमा विभाजित छ ।
सर्वोच्च अदालतले ह्वीप उल्लंघन गर्नेमाथि कारवाही गर्न नपाउने गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गरेको छ ।तर, एमालेमा एकताको प्रयास पनि जारी छ । एकताले मूर्तरूप लिएमा यो सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्नेछ ।
जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको खेमाले देउवालाई समर्थन दिए पनि सरकारमा नजाने भनेको छ । त्यस्तै यस खेमाले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगबाट समय पाएको छ । ठाकुर पक्षले दलको मान्यता पायो र एमाले एकीकृत भयो भने देउवा सरकार त्यही विन्दुबाट अप्ठेरोमा पर्नेछ ।
किनभने, गठबन्धन सरकारको कुनै पनि साझेदारले साथ छाड्यो र समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । एमाले एकीकृत भएमा उसले देउवालाई समर्थन नरहेको निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ ।
त्यसमा ठाकुर समूहले पनि साथ दिँदै देउवा सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाउ दिन सक्नेछ ।
त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यतिखेर एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउनेछ । अब पार्टीको ह्वीप नमान्ने छूट एमाले सांसदहरुलाई हुने छैन । जसपाको ठाकुर पक्षबाट समेत समर्थन नपाउने अवस्थामा देउवा अल्पमतमा परी सत्ता छाड्नुपर्नेछ ।
उपत्यकामा बिहान ७ बजेबाट रेष्टुरेन्टको ‘टेक–अवे’ सेवा खुल्ला
आठ हजार ४६७ थपिए, ६ हजार १३५ कोरोनामुक्त
नेता बचाउन चन्दा उठाउँदै जनता ! अनलाइनमा हरेक घण्टा १ हजार डलरका दरले संकलन